Qaraxii Maalinta Kirismaska 2020 | Nashville VOAD
Wac Caawin 615-340-9719
Ka dib qarax ka dhacay badhtamaha magaalada Nashville subaxnimadii hore ee Maalinta Kirismaska, dadka deggan Nashville waxay isu muujiyeen inay is taageeraan – taasoo ka dhigaysa weedha “Deris Caawinta Deriska” mid run u ah bulshadan Tennessee Dhexe. Qaraxa ayaa burburiyay daraasiin dhismayaal ah oo ku yaalla Waddada Labaad ee Taariikhiga ah, waxaana uu baabi’iyay isgaarsiintii Koonfur-bari oo dhan dhowr maalmood, in ka badan 1,000 shaqaale ah ayaa shaqo la’aan ku sameeyay boqolaal ka mid ah dadka deegaanka oo ka barakacay guryahoodii.
Dhismayaal badan ayaa weli ku socda dhismahooda iyadoo aagga dhowr-block ay ka shaqeyneyso dib u dhiska. Waa waqti-qaadasho, geeddi-socod shaqo badan oo labadaba dib-u-dhiska iyo sidoo kale lagu ilaalinayo muuqaalka iyo dareenka aagga taariikhiga ah.
Bulshada Nashville waxay sii wadaan inay halkan u joogaan si ay u caawiyaan kuwa ay dhibaatadu saamaysay Diseembar 25, 2020 taas oo qayb ka ah jawaabta iyo soo kabashada magaalada hoose ee taariikhiga ah. Caawimada muddada-dheer waxay diyaar u tahay shakhsiyaadka, qoysaska, iyo ganacsiyada ay saamaysay masiibada, oo ay maalgeliso deeqaha dawladda dhexe ee Dhibbanayaasha Dambiyada (VOCA), Aasaaska Bulshada ee Tennessee Dhexe, iyo United Way of Greater Nashville.
Hay’adaha Samafalka Katooliga, Diocese of Nashville ayaa maamusha maareynta kiisaska dhammaan badbaadayaasha. Fadlan akhri shuruudaha u-qalmitaanka ee shabakada NashvilleStrong2021.org si aad u aragto haddii aad u qalanto caawimo iyo inaad hesho liiska dukumentiyada aad u baahan tahay inaad bixiso si aad ugu qalanto.
Iyada oo ay weheliso Hay’adaha Samafalka Katooliga ee hogaaminaya maamulka kiiska, Kooxda Soo kabashada Muddada dheer ee Maalinta Kirismaska Bombing Downtown, guddi ka kooban dawladda iyo saraakiisha aan faa’iido doonka ahayn, waxay sii wadaan inay la kulmaan si loo hubiyo in la daboolo baahiyaha badbaadayaasha.
Hal shay oo aad ku kalsoonaan karto oo ku saabsan Tennesseans Dhexe – waxaan ku sii deeqnaa waqtigeena, iyo lacagteena, marka ay deriskayagu noogu baahan yihiin sida ugu badan.
Iyada oo lala kaashanayo Nashville VOAD, ururada bulshada, iyo hay’adaha dawladda, Kooxda Soo kabashada Muddada dheer ee Kajawaabista Qaraxyada Maalinta Kirismaska ayaa si degdeg ah u istaagay si ay ugu dhaqaaqdo dadaallada jawaabta degdegga ah ee soo kabashada muddada-dheer ee dhammaan badbaadayaasha.
Fiidiyowgaan waxaan ka maqalnaa gudoomiye ku xigeenka jawaabta Downtown LTRG, Valerie Craig oo ka socota Tennessee Voices for Victims, iyo sidoo kale maqalka milkiilayaasha iyo/ama maamulayaasha The Melting Pot iyo Rodizio Grill – Nashville, Simply the Best $10 Boutique, Nashville Downtown Hudheelka